Misiôna sy Fitoriana ny Filazantsara – Fiangonana Batista Biblika Ankadivato
Fiangonana Batista Biblika Ankadivato > Fanompoana > Misiôna sy Fitoriana ny Filazantsara
Koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo
Ny Baiboly, Matio 29:19-20
Ny mbola antom-pisian’ny fiangonana eto an-tany dia ny hamita ny iraka izay nanirahan’i Jesosy Tompo azy, dia ny hanao mpianatra ny firenena rehetra (Matio 28:18-20). Ambasadaoron’ny fanjakan’ny lanitra eto an-tany ny fiangonana, ary manana ny fanompoana fampihavanana ny olona amin’Andriamanitra ho vaindohan-draharahany (2Korintiana 5:20), amin’ny alalan’ny fampielezana ny Filazantsaram-pamonjena sy ny fanorenana fiangonana an-toerana.
Raha vao mazava ny vina, dia tsy maintsy manangana paikady mifanaraka amin’izany ny fiangonana, koa ireto manaraka ireto ary ireo sehatra efatra lehibe izay ilofosan’ny Fiangonana Batista Biblika Ankadivato momba ny Misiôna sy ny Fitoriana ny Filazantsara:
Tahaka ny fiangonana tany Jerosalema, dia manorina fiangonana isan-toerana, izay fanehoana ara-batana sy hita maso ny fiangonan’i Jesosy Kristy maneran-tany eo amin’ny faritra izay misy azy (Asa 11:19-26).
Tahaka ny fiangonana tany Antiokia, dia maniraka misionera mba hamangy ireo fiangonana naorina sy ireo fiangonana namana, mba hahita izay toetrany sy hampahery azy ireo (Asa 15:35).
Tahaka ny fiangonana tany Tesalonika, dia fiangonana izay anenoan’ny tenin’ny filazantsaran’ny famonjena eny tontolo eny, ka ielezan’ny finoana an’Andriamanitra (1Tesaloniana 1:6-8).
Fanohanana ny asa fitoriana sy ireo misionera
Tahaka ny fiangonana tany Filipy, dia mandray anjara amin’ny fanohanana ara-pitaovana sy ara-bola ireo asa fitoriana, ary indrindra ireo misionera matihanina (Filipiana 4:14-18).